သူမကိုယ်တိုင် အချိန်ယူဖန်တီးထားတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မှ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ချပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ – Pyit Time Htaung
သူမကိုယ်တိုင် အချိန်ယူဖန်တီးထားတဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ မှ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ချပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
By Pyit Time HtaungPosted on January 4, 2022
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လူလေးလှသလို စိတ် ထားလေး လည်း သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ ကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး သူမရဲ့ ပရိသတ် မရှိလောက်အော င်ကို အောင်မြင်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါ များသူတစ်ေ ယာက်ဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နွေဦးေ တာ်လှ န်ရေးမှာလည်း ကိုယ် တိုင်ဖန်တီးထား တဲ့ လက်မှုအနုပ ညာပစ္စည်းလေးေ တွနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ချစ်သုဝေက ဒီကနေ့မှာလ ည်း တစ်ကမ္ဘာ လုံးမှာမှ တစ်ခုတည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လ ပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထောင် စုနေ့မှာ ချပြလာခဲ့ပါတယ်။
“လွတ် လပ်ရေးနေ့… ပြ ည်ထောင်စုနေ့… ဒီတခါ “Our Land” ဖန်တီးမှုလေးဟာ Treza အတွက်တော့ reference တစ်ခုမှယူ စရာမရှိပါပဲ ဖြစ်ချင်စိတ် ကို ရအောင်ဖ န်တီး ထားတဲ့ “macrame” “🎼🎼 တို့ပြည်..တို့မြေ..များလူခပ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေ🎶🎶”….
တကယ်ပဲ ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို ့ကာကွယ်ေ ပးနေရပြီ။ ဒီတော့ “Our Land” macrame လေးကလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အ သက်ေ တွအတွက် မြေပြင်ကို တိုက်ရိုက်စီးဆင်း သွားမှာပါ။ ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေ ကတော့ သူမကိုယ်တို င်ထိုးထားတဲ့ macrame လေးကိုေ ရာင်းချပြီး ရံပုံငွေရှာဖွေခဲ့ရာ ပထမအကြိမ် သိန်း (၆၀) ကျော်၊ ဒုတိယ အကြိမ် သိန်း (၁၇၀) ကျော် ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတတိယ အကြိမ်မှာ ရံပုံငွေတွေ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရ ပါဦးမယ်နော်။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ လူေလးလွသလို စိတ္ ထားေလး လည္း သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့ အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝ ကေတာ့ တစ္နိုင္ငံလုံး သူမရဲ့ ပရိသတ္ မရွိေလာက္ေအာ င္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူခ်စ္လူခင္ေပါ မ်ားသူတစ္ေ ယာက္ျဖစ္ပါ တယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့ေႏြဦးေ တာ္လွ န္ေရးမွာလည္း ကိုယ္ တိုင္ဖန္တီးထား တဲ့ လက္မႈအႏုပ ညာပစၥည္းေလးေ တြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ခ်စ္သုေဝက ဒီကေန႔မွာလ ည္း တစ္ကမၻာ လုံးမွာမွ တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ Macrame ေလးကို လြတ္လ ပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္ စုေန႔မွာ ခ်ျပလာခဲ့ပါတယ္။
“လြတ္ လပ္ေရးေန႔… ၿပ ည္ေထာင္စုေန႔… ဒီတခါ “Our Land” ဖန္တီးမႈေလးဟာ Treza အတြက္ေတာ့ reference တစ္ခုမွယူ စရာမရွိပါပဲ ျဖစ္ခ်င္စိတ္ ကို ရေအာင္ဖ န္တီး ထားတဲ့ “macrame” “🎼🎼 တို႔ျပည္..တို႔ေျမ..မ်ားလူခပ္သိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ခြင့္တူညီမၽွဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ🎶🎶”….
တကယ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလို ့ကာကြယ္ေ ပးေနရၿပီ။ ဒီေတာ့ “Our Land” macrame ေလးကလည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့အ သက္ေ တြအတြက္ ေျမျပင္ကို တိုက္ရိုက္စီးဆင္း သြားမွာပါ။ ” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝ ကေတာ့ သူမကိုယ္တို င္ထိုးထားတဲ့ macrame ေလးကိုေ ရာင္းခ်ၿပီး ရံပုံေငြရွာေဖြခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္ သိန္း (၆၀) ေက်ာ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ သိန္း (၁၇၀) ေက်ာ္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုတတိယ အႀကိမ္မွာ ရံပုံေငြေတြ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရ ပါဦးမယ္ေနာ္။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
Posted in AstrologyTagged ချစ်သုဝေ
Previous post မင်္ဂလာဆောင်အပြီး တစ်လကျော် အကြာမှာပဲ ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးေ လးကိုရရှိခြဲ့ ပီ ဆိုတဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့သားဂန်း
Next post လူသိရှင်ကြား တရားဝင်စေ့စပ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဗီဒီယိုလေးနဲ့တကွပ ရိတ်သ တ်ကို အသိပေးလိုက်တဲ့ ကောင်းပြည့်နဲ့ သန္တာဗိုလ် တို့ အတွဲလေး